Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Infekshannada COVID ee xilligan la joogo Goobaha Fasaxa Xeebaha
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Socdaalka inta lagu jiro COVID-19 macnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad u diyaar garowdo waxyaabaha la yaabka leh iyo isbeddelada dhaqaaqa dhaqso leh. Iyada oo ku saleysan tirooyinka maanta heerka caabuqa ee
Goobaha xeebaha waxay gaaraan ku dhawaad ​​12,000 ilaa eber iyadoo lagu saleynayo heerka caabuqa hadda ka jira meesha loo socdo xiriirka 1 milyan oo deggan.
Goobaha xeebaha qaarkood ee adduunka ayaa mar kale u furmaya socdaal iyo dalxiis, qaarkoodna dadka safarka ah ee la tallaalay.
Safarro badan ayaa raadinaya inay ku nastaan ​​qaar ka mid ah xeebaha caanka ah ee adduunka, laakiin waxay rabaan inay ku noolaadaan ammaan iyo caafimaad.
Adigoon eegin xayiraadaha safarka kuna saleysan xogta Cabbirrada, eTurboNews isku daray liis. Waxay bixinaysaa xoogaa talooyin ku saabsan xaaladda hadda ee COVID-19
Way adag tahay in la eego tirooyinka runta ah. Dal yar dabcan wuxuu leeyahay tirooyin kayar marka loo barbar dhigo waddan weyn.
Isbarbar dhiggan, eTurboNews ku tiirsaneyd culeyska hadda jira 7-dii maalmood ee ugu dambeysay COVID-19 ee la xiriirta 1 milyan oo dad ah. Wadamada ay ka yaryihiin 1 milyan oo qof ayaa loo xisaabiyaa saami ahaan iyadoo loo maleynayo inay jiraan hal milyan oo qof.
Iyadoo lagu saleynayo lambarkan British Virgin Islands oo leh 11,989 kiis oo hadda ah COVID-19 kiisas firfircoon 7-dii maalmood ee la soo dhaafay, waxay umuuqataa inay tahay meel xeebeed loo aadayo caqabado waa weyn, halka Cumaan oo kiisaska eber leh laga yaabo inay ka mid tahay meelaha ugu nabdoon ee qof walba ku raaxeysan karo adduunka.
Ma jiro lambar sixir, iyo arrimo kale ayaa iyaguna door ka ciyaara, laakiin meelaha leh wax ka yar 1000 caabuq halkii milyan waxay u furi doontaa xulasho wanaagsan oo xeebaha kuwa si ammaan ah u safri kara.
Tusaale ahaan Kariibiyaanka waa gobol aan jasiirad la mid ahayn tan kale. Jasiiradaha Virgin ee Ingiriiska ayaa leh tirada ugu badan ee ku dhawaad ​​12,000 infekshan halkii milyan, marka la barbar dhigo Grenada oo leh lambarka ugu hooseeya Kariibiyaanka oo leh 27 kaliya. - Bahamas, Jamaica, St. Lucia, ama Dominican Republic waxay ku dhex jiraan kooxda waddamada loo arki karo inay halis yar yihiin.
Xeebaha Cumaan, ugu hooseeya BADBAADADA meel kastoo xeeb loo socdo: ZERO
Seychelles, tirada infekshannada cusub hoos ayey u dhacday 8% usbuucii hore, laakiin 555 kiis oo firfircoon oo ka jira waddan ay ku nool yihiin 98,000+ qof, ayaa weli heerka loo arki karaa inuu sarreeyo. Qubrus, Martinique, Cuba, ama Spain waxay ku jiraan xaalad lamid ah.
Tirooyinka kiisaska COVID ee firfircoon halkii milyan halkii meelaha fasaxa xeebaha
laga bilaabo ugu sarreeya ilaa kan ugu hooseeya:
Jasiiradaha Virgin ee Ingiriiska: 11,989
Dib u midoobid: 1,463
Koonfur Afrika: 1,401
Trinidad iyo Tobago: 1,033
Faransiis Faransiis: 708
Sacuudi Carabiya: 238
Jamhuuriyadda Dominican: 230
Sao Tome iyo Principe: 63